Nnwom 69 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔbɔɔ mpae hwehwɛɛ ogye
“Wo fi ho mmɔdenbɔ amene me” (9)
“Yɛ ntɛm gye me so” (17)
“Wɔmaa me nsã a emu kaw sɛ mennom” (21)
Wɔde ma dwom kyerɛfo; ɔkwan a wɔfa so to no: “Sukooko.” Dawid dwom. 69 O Onyankopɔn, gye me, na nsu reyɛ afa me.*+ 2 Matɔ aforɔ* mu, na minnya baabi nnyina.+ Masi nsu a emu dɔ mu,Na asubɔnten a ano yɛ den de me rekɔ.+ 3 Mateɛteɛm ara abrɛ;+Me nne afã. Mahwɛ me Nyankopɔn kwan ara abrɛ.*+ 4 Wɔn a wɔtan me kwa no,+Wɔdɔɔso sen me ti so nwi mpo. Wɔn a wonya me a wobeyi me afi hɔNe wɔn a wokyi me kɔkɔkɔkɔ no* adɔɔso. Ade a minwiae mpo, wɔayɛ ara agye wɔ me hɔ. 5 O Onyankopɔn, nkwaseasɛm a madi nyinaa wunim,Na me bɔne nso, w’ani tua. 6 O Awurade Tumfo, asafo Yehowa,Wɔn a wɔn ani da wo so no, mma me nti wɔn ani nnwu. O Israel Nyankopɔn,Wɔn a wɔhwehwɛ wo no, mma me nti wɔn anim nngu ase. 7 Wo nti animguase aba me so,+Na aniwu adura m’anim.+ 8 Madan ɔnanani ama me nuanom,Ne ɔhɔho ama me maame mma.+ 9 Wo fi ho mmɔdenbɔ amene me,+Na wɔn a wogu w’anim ase no, wɔn animguase aba me so.+ 10 Bere a meyɛɛ akɔnkyen* brɛɛ me ho* ase* no,Nkurɔfo buu me animtiaa. 11 Bere a mede awerɛhow ntama* yɛɛ m’ataade no,Nkurɔfo tweetwee me.* 12 Sɛ nkurɔfo tena kurow pon ano a, me ho asɛm ara na wɔka,Akɔwensafo twa me ho nnwom. 13 Nanso Yehowa, ma me mpaebɔ nnu w’asomWɔ bere a ɛsɛ mu.+ O Onyankopɔn, wo dɔ bebrebe a enni huammɔ nti,Fa wo nkwagye nnwuma a enni huammɔ no ma me mmuae.+ 14 Yi me fi atɛkyɛ mu;Mma memmmem. Gye me fi wɔn a wɔtan me nsamNe nsu a emu dɔ mu.+ 15 Mma asubɔnten a ebu fa so no mmfa me nnkɔ,+Mma nsu a emu dɔ mmfa me,Na mma menntɔ abura* mu.+ 16 O Yehowa, gye me so, na wo dɔ a enni huammɔ no ye.+ Wo mmɔborɔhunu bebrebe nti twa w’ani bɛhwɛ me,+ 17 Na mfa w’anim nhintaw w’akoa.+ Madi amia, enti yɛ ntɛm gye me so.+ 18 Twiw bɛn me na begye me;*Gye me fi m’atamfo nsam. 19 Wunim animtiaabu, aniwu, ne animguase a merefa mu.+ W’ani tua m’atamfo nyinaa. 20 Animguase ama me koma abubu, na ayɛ kuru a enni sabea.* Ná m’ani da so sɛ m’asɛm bɛyɛ obi mmɔbɔ, nanso mannya obiara;+Mehwehwɛɛ awerɛkyekyefo, nanso mannya bi.+ 21 Wɔbɛma me aduan no, awuduru na wɔde maa me;+Osukɔm dee me no, wɔmaa me nsã a emu kaw sɛ mennom.+ 22 Ma wɔn adidipon nyɛ afiri mma wɔn,Na ma wɔn ahonya nso nyɛ afiri.+ 23 Ma wɔn ani so nyɛ tumm, na wɔanhu ade,Na ma wɔn sisi nhodwow daa. 24 Hwie w’abufuw gu wɔn so,Na ma w’abufuhyew ntoa wɔn.+ 25 Ma wɔn tenabea* nna mpan;Mma obiara nntena wɔn ntamadan mu.+ 26 Nea wobɔɔ no no, ɔno na wɔtaa no so,Na wɔn a wupiraa wɔn no yawdi na daa wɔka ho asɛm. 27 Wɔn afodi no, fa bi ka ho soa wɔn;Mma wonnya wo trenee mu kyɛfa. 28 Ma wɔmpopa wɔn din mfi ateasefo nhoma* mu;+Mma wɔnnkyerɛw wɔn din nnka atreneefo ho.+ 29 Seesei de, merehu amane na meredi yaw.+ O Onyankopɔn, ma wo nkwagye mmɔ me ho ban. 30 Mede nnwonto beyi Onyankopɔn din ayɛ,Na mede aseda bɛkamfo no. 31 Eyi bɛsɔ Yehowa ani asen nantwi,Nantwinini a ɔwɔ mmɛn na ne nan mu apae.+ 32 Ahobrɛasefo behu, na wɔadi ahurusi. Mo a mohwehwɛ Onyankopɔn, monhyɛ mo ho den.* 33 Yehowa tie ahiafo,+Na ɔremmu ɔno ara ne nkurɔfo a wɔakodi obi man so no animtiaa da.+ 34 Momma ɔsoro ne asaase nyi no ayɛ;+Ɛpo ne nea ɛwom nyinaa nyi no ayɛ. 35 Efisɛ Onyankopɔn begye Sion+Na wasan akyekye Yuda nkurow;Ɛhɔ* na wɔbɛtena na ayɛ wɔn dea. 36 Ne nkoa asefo na ɛbɛyɛ wɔn dea,+Na wɔn a wɔdɔ ne din+ na wɔbɛtena hɔ.
^ Anaa “Mamem atɛkyɛ mu.”
^ Anaa “m’aniwa ayɛ siamoo.”
^ Anaa “wɔn a wɔtan me kwa.”
^ Anaa “brɛɛ me kra.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Bere a misui na midii mmuada.”
^ Nt., “de me yɛɛ akasabebu.”
^ Anaa “amoa.”
^ Anaa “na m’abam abu.”
^ Anaa “tenabea a wɔagye ho ban no.”
^ Anaa “nkwa nhoma.”
^ Anaa “monhyɛ mo koma den.”
^ Kyerɛ sɛ, asaase no so.